नायक पुष्प खड्का खेतीपाती गरेर जन्मथलोमा रमाउँदै ( हेर्नुहोस) – Khabarbot
नायक पुष्प खड्का खेतीपाती गरेर जन्मथलोमा रमाउँदै ( हेर्नुहोस)
काठमाडौँ : निशेधज्ञा भएपछी निकै व्यस्त व्यस्त सेलेब्रेटीहरुलाई फुर्सद मिलेको छ। सबै सेलेब्रेटी आफ्नो आफ्नो घरमा थन्किएका छन्। पहिलेको निषेधाज्ञामा कसैले चिया पकाउन सिकेका थिए। कसैले अन्डा उसिन्न सिकेका थिए। कोहि भने बोलेरै विवादमा परेका थिए। तर, यसपटकको निषेधाज्ञा अलि सुनसान भएको जस्तो लाग्नमा आएको छ। यसपटकको निषेधाज्ञामा सेलेब्रेटीहरु चुपचाप बसेका छन्। कसैकसैले फाट्टफुट्ट देशको चिन्ता गरेर देशको बारेमा, देशको राजनितिक परिस्थितिको बारेमा स्टाटस लेखिरहेका छन्। कोहि समाजसेवामा व्यस्त छन्। यस्तै, अभिनेता पुष्प खड्का आफ्नो जन्मथलो पुगेर खेतिपाती गर्न थालेका छन्।
चार दिन अघि कैलाली पुगेका पुष्पले खेत खन्दै गरेको फोटो पोस्ट गर्दै आफ्नो फेसबूकमा लेखेका छन्-‘नेपाल कृषिप्रधान देश हो। मलाई आफू किसान हूनूमा गर्व लाग्छ।’ लागिहाल्छ नि। एक दिन पनि हैन एकछिन त हो। बर्षभरी खन्नु परेको छैन। तर, पुष्प सेलेब्रेटी हुन्। सेलेब्रेटीले आफ्नो जन्मस्थल पुगेर आफ्नो खेतबारीमा काम गर्नु राम्रै हो। अहिलेका युवा आफ्नो खेतबारीमा काम गर्न लजाउछन्। उनिहरुलाई यसबाट काम गर्ने प्रेरणा मिल्न सक्छ।
सबै कुरा त ठिक छ। तर, वडिगार्ड चै खै त? कि राजधानिमा मात्रै वडिगार्ड चाहिने हो? यो प्रश्न पुष्प जि कै फ्यानको हो। पुष्पलाई वडिगार्डको विषयमा अहिले पनि दर्शकहरुले प्रश्न गरिरहेका छन्। खै के थियो कुन्नी त्यो वडिगार्डमा! पुष्पले खेत खन्दै गरेको फोटोको कमेन्ट सेक्सनमा त झन् वडिगार्ड कान्ड खुबै मच्चिएको छ। जे होस, फुर्सदको समयमा आफ्नो जन्मथलो पुगेका पुष्प उतै रमाइरहेका छन्। पुष्पले केही अगाडि जन्मथलोका बिरामिका लागि ५० ओटा सिलिन्डर वितरण गरेका थिए।
जन्मेको एक बर्षमै बाबू आमाले छोडे अहिले मामाको साहारामा बाचेका दीर्घ परियार को सबैलाई रुवाउने कहानी।। भिडियो सहित